दुई सिईयोको कारण नेप्सेमा बबाल, कसले गर्लान गोल ? - Bidur Khabar
दुई सिईयोको कारण नेप्सेमा बबाल, कसले गर्लान गोल ?
विदुर खबर २०७५ साउन ३ गते ३:१०
नुवाकोट÷ दुई सिईयोको कारण नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा बवाल भएको छ । को आधिकारी र को हैन भन्ने तिव्र विवा हुँदा नेप्सेमा कसले बाजी मारेर गोल गर्लान भन्ने कौतुहलता बढेको छ ।
सेयर बजार निरन्तर गिरावट आइरहेको समयमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका विषयमा विवाद सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदलाई अध्यक्ष लक्ष्मण न्यौपानेले हाजिर गर्न नदिएपछि विवाद बढेको हो ।
रमेश अर्याल कि चन्द्रसिंह साउद अब कसले गर्लान गोल ?
गत असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७४ भदौ १४ पछि भएका सबै राजनीति नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेसँगै नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदको नियुक्तिलाई पनि सरकारले बदर गरेको थियो । सरकारले साउदको नियुक्तिलाई खारेज गरेसँगै अर्थमन्त्रालयले रमेश अर्याललाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि असार २५ मा नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो ।
तर, ०७४ असोज २४ मा नियुक्ति पाएका साउदले सर्वोच्च रिट दिएका थिए । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पाएपछि उनी बुधबार कार्यालय पुगेका थिए । तर, कार्याकक्षमा सरकारले भर्खरै नियुक्ति गरेका सिइओ अर्याल थिए । नेप्सेका अध्यक्ष न्यौपानेले आफूलाई हाजिर गर्न नदिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदले बताए ।
‘मैले हस्ताक्षर गर्न खोज्दा अध्यक्षले मन्त्रालयको आदेश छैन भने । त्यसो भए भोलि आदेश लिएर आउनुहोस् अनि म जसैगरी पनि हाजिर गर्छु भनेर फर्किए,’ उनले भने । सर्वोच्चले साउदलाई अन्तरिम आदेश दिएर पुनर्बहाली गरे पनि औपचारिक रूपमा मन्त्रालयबाट पत्र नआएकाले यस्तो समस्या सिर्जना भएको एक लगानीकर्ताले बताए ।